Iberibe ọkụkọ na ehi - Goodao Technology Co., Ltd.
A na-eji anụ ọkụkọ na anụ ehi eme ọgwụgwọ ahụ n'enweghị ngwaahịa na-emegharị ahụ, ọka wit, ọka ma ọ bụ soy. Ọ nweghị ihe mgbakwunye agba, agba, ma ọ bụ ihe nchekwa echekwara. Protein bụ ihe No.1. Ọ bụ nri ọhụrụ maka anụ ụlọ nke na -atọ ụtọ, na -edozi ahụ ma dịkwa mfe mgbaze.
Protein Crube: 48.6%min
Abụba Crube: 7.7% karịa
Fiber Crube: 0.1% kacha
Oke ntụ: 4.3% max
Aha ngwaahịa Mpekere ọkụkọ & anụ ezi
Ngwaahịa bụ isi ihe Ọkụkọ, beef
Ndị otu ọ bụla sitere na ndị na -ere ngwaahịa ngwaahịa dị irè dị elu na -elebara mkpa ndị ahịa anya na mkpakọrịta ya maka anụ ọkụkọ ara ehi China na -enye nnukwu anụ, anyị na -anabata atụmanya ọhụrụ na nke ochie site n'akụkụ niile nke ndụ kwa ụbọchị iji gwa anyị okwu maka mmekọrịta ụlọ ọrụ ogologo oge na inweta ọlụlụ ibe ha!
Nri anụ ọkụkọ China, ọkụkọ nri ngwa ngwa, anyị kwenyere n'ịmebe mmekọrịta ndị ahịa nwere ahụike yana ezigbo mmekọrịta maka azụmaahịa. Mmekọrịta chiri anya na ndị ahịa anyị enyerela anyị aka ike agbụ ọkọnọ siri ike wee nweta uru. Ngwa ahịa anyị emeela ka anyị nabata ebe niile yana afọ ojuju nke ndị ahịa anyị nwere ọnụ ahịa n'ụwa niile.
Nke gara aga: Sanwichi mkpọ ọkụkọ
Osote: Mpekere ọkụkọ na ọbọgwụ
Mpekere ọkụkọ & anụ ezi